Imyuziyam yoTyhokoleji (Prague), i-Choco-Story Story Chocolate Museum - iPrague
Yurophu Republic yaseCzech Prague
IMyuziyam yeShokoleta (Prague)
Idilesi: Celetná 557/10, 110 00 Staré Město, Czech Republic
Iiyure zokuvula: 10: 00-19: 00
Ifowuni: +420 224 242 953
IPrague , inkulu-dolophu yaseCzech Republic , yenye yeyona mizi yakudala eYurophu. Kukho ininzi enkulu yezinto ezikhangayo , enye yazo i-Museum Museum (Choco-Story Chocolate Museum). Itholakala kufuphi neDalaph Square Square . Emva kokushiya iimyuziyam, unokutyelela encinci "esitolo" esincinci. Ithengisa i-tsholetele yaseBelgium enomdla, oye wachaza nje ngeholide .
Esikwisakhiwo apho "imyuziyamu enothabathekileyo" ikhona khona, ngexesha lokuphila kwayo yonke, kwaye oku malunga neminyaka eyi-2600, ukulungiswa kunye nokulungiswa okuninzi kwenziwa. Isitayela sokwakhiwa sisuka kwi-Gothic yokuqala ukuya kwiRococo yanamhlanje. Ekuqaleni kwekhulu le-16, isimboli se-peacock sasiyifumene kwi-facade yesakhiwo, okwakungowona xesha yayisayine indawo yokufaka inani lokubala inani lezindlu. Ngomnyaka we-1945, isakhiwo sawonakalisa kakhulu emlilweni, kodwa kamva savuselelwa. Kwakunokwenzeka ukugcina uphawu lwezindlu oluhlukileyo - le peacock efanayo. I-Museum yoThokoleta ePrague, eyisebe laseBelgium, yavulwa kwakhona ngoSeptemba 19, 2008.
Yintoni enomdla malunga nomyuzi we-chocolate?
Kulo mlango, isivakashi ngasinye kwiimyuziyam sinikezwa ngeglasi yetshokolethi eshisayo okanye ityile. Kwisakhiwo esincinci kukho iihholo ezintathu:
Eyokuqala, iindwendwe ziza kuqhelana nembali yecocoa kunye nokubonakala kwayo eYurophu.
Kwigumbi lesibini uza kufumana ibali elincamisayo malunga nemvelaphi yetshokoleji kunye nokuqala komveliso. Emva koko, unokuzibandakanya kwinkqubo yokwenza ushokoledi, ulandele iteknoloji yaseBelgium, uze uyilungise indalo yakho.
Ekugqibeleni, indawo yokubonisa, iqoqo ekhethekileyo ye-chocolate wrappers kunye neephakheji ziqokelelwa.
Kwi "minyuziyamu enonophelo" inikwe iqoqo elikhulu leempahla ezihlukeneyo, ezisetyenziswe ngabaphathi ngexesha lokulungiselelwa kweetyiphule. Kwakhona ungabona ezininzi izixhobo zokutya: isamba esisetyenziselwa ukusika ubhontshisi be-cocoa, isando seeshukela ekwahlukanayo, iintlobo ezahlukeneyo zokufakela iileyile kunye neesekese nabanye abaninzi. Zonke iimiboniso zinezandla, kubandakanywa nesiRashiya.
I-museum yetshokolethi inikeza uhambo lwabantwana kunye nokuzonwabisa, okubizwa ngokuba ngumdlalo weChola. Umntwana ngamnye ongena kumyuziyam unikezwa ngephepha elingenanto kunye namakhadi asibhozo afunekayo afakwe ngokufanelekileyo kwiphepha. Ukushiya emva kohambo, abantwana bahambisa la maqhekeza kwaye, ukuba amakhadi atholakala ngokuchanekileyo, lo mntwana ufumana isipho esincinane.
Ungayifumana njani kumyuzi we-chocolate kwi Prague?
Kulula ukufika khona: kwi-trams I-8, 14, 26, 91 iyimfuneko ukulandela imizila ukuya kwi-Dlouha trida, kwaye ukuba uya kwenye yeeTam ze-2, 17 ne-18-kwi-Staroměstská. Ngenxa yobunzima bokupaka kungcono ukuba ungasebenzisi imoto. Nangona kunjalo, ukuba ngaba ufikile kumyuziyamu ngemoto, ukupaka komhlaba ngaphantsi kwisebe laseTotva.
Imyuziyam yaseCracolate yasePrague itholakala eCeletná 557/10, 110 00 i-Staré Město. Isebenza ukususela ngo-10: 00 ukuya ku-19: 00 iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Ithekiti yomntu omdala ixabisa i-260 CZK, malunga ne-$ 12.3. Kubafundi kunye nabantu abadala, ithikithi ixabisa i-199 CZK okanye malunga ne-$ 9.
IHolo yaseKapa iHolo
UJay Law wamema uDiCaprio ukuba ahlekise
Ukutya kweVasilisa Volodina
IQuantil kubafazi abakhulelweyo
Ikhekhe lomquba ngamakhowe
Ukutya okubhenkisayo kuncinane
I-Polycythemia - Iimpawu kunye neNyango
Yintoni ubuhlobo - indlela yokufunda ukuba ngabahlobo ngokuchanekileyo?
Usulelo lwe-Intestinal In Children - Izimpawu
Ubomi bomntu kaSara Paulson
ULeonardo DiCaprio uqinisekisile umcimbi wakhe noCamille Morrone
Ummandla weSouth Federation
Ukukhathazeka - unyango kunye nezilwanyana zomntu
ZeBallet ii-flats 2013
Yintoni eluncedo kwiimbotyi zeentso zomzimba?